Dawlada Somaliya Oo Warsaxaafadeed ku Canbaaraysay Gantaal Lagu Weeraray Saudi Arabia.(Akhriso) | Awdalmedia.com
Dawlada Somaliya Oo Warsaxaafadeed ku Canbaaraysay Gantaal Lagu Weeraray Saudi Arabia.(Akhriso)
Wasaarada arrimaha dibeda ee xukuumada Somalia ayaa caawa uun ku baraarugtay warna ka soo saartay gantaal todobaad ka hor kooxaha xuutiyiinta Yemen ku weerareen magaalada Riyadh ee caasimada Sacuudiga.
“Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Riyadh ee ay ku qaadeen mucaaradka Houthi ee Yemen” ayaa lagu yiri qoraalka caawa ka soo baxay Wasaarada arrimaha dibeda.
“Weerarku waa xadgudub cad oo ka dhan ah Sharciga Caalamiga ah waxaanan muujineynaa sida aan uga walaacsanahay kor u kaca rabshadaha ka taagan kuwaasoo wiiqaya ammaanka gobolka iyo caalamkaba” ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu yiri.
Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay sheegtay iney la wadaageysaa Dawladda iyo Dadka Saudia Arabia isgarab taag si ay u ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida. “Waxaan ku celineynaa balanqaadkayaga inaan sii wadno si dhow inaan ula shaqeyno Dowladda Sacuudi Carabiya, lamaaneyaasheena gobolka iyo beesha caalamka, dadaal kasta oo lagu joojinayo khatarta argagixisada iyo in la ilaaliyo nabadda iyo amniga gobolka iyo adduunka oo dhan” ayaa lagu soo gebagebeeyey war-Saxaafadeedka.